KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Qarax ka dhacay Degmada Wajeer
Sunday 3 February 2013 11:14
Qarax ka dhacay Degmada Wajeer
Nairobi (KON) - Ugu yaraan hor Qof ayaa ku dhintay kadib Qarax weyn oo Xalay ka dhacay Degmada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Qaraxaan ayaa dhacay kadib Nin watay walxaha Qarxa sitayuu isku Qarxiyay Bartamaha Magaalada.
Saraakiisha Booliska ayaa xaqjiiyay in mid Ciidamadooda uu ku geeriyooday qarax ay u maleeyeen inuu ahaa Ismiidaamin, kaasi oo lala eegtay Kolonyo Ciidamo ah oo kasoo laabtay Howlagalka Somalia ee ka dhanka ah Al shabab.
“Salaadii cishaha markii laga soo baxay ayaa waxaa la maqlay magaalada dhexdeeda qarax weyn oo ka dhacay. Marka waxaa xaqiiqo noqotay in nin madoow ah oo gobollada kale ee Kenya ka yimid oo aan reer Waqooyi bari ahayn uu is Qarxiyay,” Ayuu yiri Nin la hadlay Idaacada BBC-Somali.
3 Qof oo Labo kamid ah ay yihiin Saraakiil Kenyana ah ayaa ku dhaawacmay Qaraxa.